Quicktime ma aha oo kaliya shaqeeyaan sida ciyaaryahan ahaan, waxay kaa caawin karaan inaad sameeyo waxyaalo badan. Waxaad isticmaali kartaa inaad kala soo baxdo trailer, sameeyaan ama wax ka bedel filimada, iyo xataa badalo wmv, AVI, iyo MKV in QuickTime. Halkan waxaan ku soo uruuriyaan 10 muuqaalada weyn ee QuickTime in aad ka maqnaan laga yaabaa. Just akhri maqaalka hoos ku qoran.
1. Download QuickTime isjiidka
Waxaad ay awoodaan in ay isjiidka QuickTime free download in 1080p ammaan ku Lugood Movies website isjiidka, iyo qulquli videos at 480p, 720p ama 1080p la QuickTime. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo May 22, 2013, waji Apple soo fursadaha trailer download. Degsado isjiidka QuickTime noqotey mid aan suurtagal iyo video geeyo noqon doonaa oo kaliya 480p ama 720p x.
Si kastaba ha ahaatee, aad uma baahna in ay ka murugoodo, kaliya heli hago halkan on sida loo soo bixi isjiidka QuickTime ka servers Apple ee.
Screen 2. Record QuickTime
Ciyaaryahanka QuickTime kuu ogolaanaysaa inaad si fudud u qoraan waxa ku dhacda aad Mac ee shaashadda ama record kaliya gobolka ka mid ah shaashadda.
Ka fikir waxa ku saabsan, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u abuuraan tutorial wax bara, ama aad Banaanbaxa u dhib, ama u qoraan ciyaar kubada cagta geeyo ama show TV a. Waxaad si fudud u samayn kartaa QuickTime movie la QuickTime feature qabashada shaashadda. QuickTime ee shaashadda awood duubo ka dhigi doonaa wax walba oo inta badan ka sahlan iyo funnier aad u.
3. Broadcast video live
Waxaad isticmaali kartaa QuickTime idaacadda si ay u sii qulquli video live in server QuickTime ah. Soo saaridda tayo sare leh dhacdooyinka live dhalmo Internet noqon kartaa inta badan ka sahlan oo dhakhso.
QuickTime Idaacadda weheliso Server QuickTime Streaming iyo QuickTime bixisaa nidaamka qurux badan MPEG-4-salaysan warbaahinta Internet. Waxba ma waxaad tahay bilow cusub ama xirfad ah, aad ugu dhakhsaha badan ku raaxaysan doonaa faa'iido weyn QuickTime Idaacadda waxay keentaa.
Movie 4. Edit QuickTime
Qaado QuickTime sida editor video ah, waxay kaa caawin karaan inaad la shakhsiyeeyo aad videos by falinjeeerka, qoqobada, qaybsama ama shanleeyo clips, iwm Waxaad edit karaa QuickTime video aan bilaabay iMovie ee casri ah. QuickTime function falinjeeerka kuu ogolaanaysaa inaad soo saarto content ee aan loo baahnayn oo ah filim ama filim clip ah. Sidoo kale QuickTime kuu ogolaanayaa inaad isku shaandheyn ama hoos ku dhajisan aad ka yeellay video in booska la daawado ah.
Fiiro gaar ah: QuickTime X (version kasta) ma taageeri qoqobada videos.
5. Beddelaan wmv, AVI, MKV in QuickTime for loo maqli karo
Qaab default QuickTime waa MOV. Si aad u ciyaaro wmv, AVI ama MKV, in aad marka hore u baahan tahay si loo soo dajiyo 2 qaybood QuickTime, Flip4Mac ama Perian , in lagu daro taageerada codec dheeraad ah oo QuickTime. Flip4Mac u ogolaanaya loo maqli karo ee qaabab Windows Media Player, halka Perian taageertaa qaabab ka badan.
Wixii Mac 10.9 , 2 qaybood badalo doonaa wmv, avi, mkv, si QuickTime MOV korkiisa file furay ciyaaryahanka QuickTime. Ka dib qaab beddelidda, waxaad bilaabi kartaa inuu u ciyaaro aad videos. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ordaya ah Mac 10.8 ama ka weyn versions , waxaad ka ciyaari kartaa wax video aan diinta wmv ama avi in QuickTime .
QuickTime Oo weliba, waxay bixisaa presets filaayo in TV iPhone, iPod, Apple . Sidaas, waxaad si fudud u bedeli karaan QuickTime for loo maqli karo meel kasta iyo waqti kasta. Xitaa QuickTime kuu ogolaanaysaa inaad ka filimada Macdan music .
Fiiro gaar ah: Haddii ay sidaa tahay, waxaa sanqadhaya lahayn QuickTime la movie Divx, kaliya rakibi qayb DivX si ay kuu caawiyaan. Haddii aad soo gaarto xaaladda in Flip4Mac iyo Perian ma shaqeyn karaan ka dib markii lagu casriyeeyo ee Mac OS cusub, kaliya isku dayi VLC sida kale QuickTime ah .
6. View Video QuickTime in Full Screen
QuickTime Pro siisaa doorasho buuxda shaashadda. Waxaad heli kartaa loo maqli movie waayo-aragnimo fiican samaynayo aragti shaashad buuxda, samaynta kaliya filimka la arki karo halkii QuickTime ka Player uu furmo suuqa, desktop, ama daaqadaha kale.
Haddii aad qabto wax badan monitor dhismeedkan, waxaad daawan kartaa oo kaliya filimada ee monitor hoose ee shaashadda buuxa halkii aad monitor labaad. Haddii aadan la isticmaalayo QuickTime Pro, hubi hagaha on sida ay u arkaan movie QuickTime ah ee shaashad buuxda aan Pro . Sidoo kale kaliya riix halkan si aad u aragto sida loo dhigay QuickTime joogaan shaashad buuxda ka dib markii aad filimka la dhammeeyo .
7. cadaadi QuickTime video
Waxaad samayn kartaa si aad wareejinta iyo uploading faylka badan macaan by compressing QuickTime video gudaha la'aan ah software-saddexaad. Iyadoo video QuickTime ka compressing, waxaad ka heli kartaa video filaayo in hoorto si iPhone / iPad / iPod Touch ama web bixinta.
QuickTime X bixisaa 3 riixo presets, Gacanta, Wi-F iyo Broadband. Waad beddeli qaabka QuickTime hadda si MPEG-4 qaab. Iyadoo QuickTime Pro, waxaad dooran kartaa in Movie movie QuickTime, dhigay nooca riixo si H.264 (waafaqsan weyn), Rate jir ah, ama heerka yara ee gacanta ka badan ee video riixo.
8. Display QuickTime Movie Cinwaan
QuickTime muujiyaan karaa Cinwaan aad movie marka lagu ciyaaro. Haddii kuwan raadkaygay qoraalka ah ee video aan la muujinaya karaa QuickTime X (Mac 10.6 ama ka dib), waxaad isku dayi kartaa si loo soo dajiyo QuickTime 7. Apple ayaa sida ugu QuickTime X qabtaa kuwan raadkaygay text bedelay, si kastaba ha ahaatee, QuickTime 7 taageertaa badan oo ka mid ah muuqaalada aqlka ee QuickTime X.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad isticmaasho MP4 la SRT in QuickTime Player, waxaad u baahan tahay inaad marka hore Perian rakibay dibna loogu badalo aad video in qaab kale sida avi. Perian ku shuban kartaa wax kasta oo Cinwaan avi. Sidoo kale waxaad isku dayi kartaa oo kaliya ciyaaryahan VLC.
9. Isku QuickTime Movie Clips
Waxaad isticmaali kartaa QuickTime in la isu geeyo video clips ka mid galeen. QuickTime waa ka fog ka sahlan yahay iMovie.
Talaabada 1:. Just jiidi oo hoos u movie 1aad wuxuu galay QuickTime ee interface iyo tilmaan meel in clips kale movie ee dulqabo waqtiga gelin doonaa
Talaabada 2: Jiid iyo hoos u movie 2aad in booska. Markaas oo keliya ku celinayaa nidaamka kuwa ku darto clips movie dheeraad ah.
Talaabada 3: Riix badhanka "Close" in ay arbushin ilaa file badbaadiya uu furmo suuqa. Oo waxay doortaan "Save As A Movie isku-" doorasho. Sidaas, waxaad ku dhameysan isku QuickTime filimada clips.
10. Upload QuickTime video in YouTube / Facebook / vimeo ...
Ma rabtaa inaad ku raaxaysatid QuickTime movie dadka kale? Si fudud Waxaad gali kartaa adiga oo QuickTime video in YouTube, Facebook, vimeo ama Flickr ka dibna la wadaagto dadka kale.
Dhab ahaantii, waxaad gali kartaa videos via goobaha video qaybsiga aad xisaabtiisu. Laakiin websites kala duwan waxay leeyihiin shuruudaha u suurta qaabab video ay. Mararka qaar waxaad ordo qaab ama codes arrinta incompatibility soo galeen. Halkan QuickTime ka saari doonaan oo dhan dhibaato aad la video qaybsiga shaqada.
Sidee si ay u gudbiyaan Apps ka iPhone in Computer
Sida loo soo celiya iPhone ka iCloud
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada iyo SMS ka Blackberry si iPhone
Sida loo dayactir iPhone Broken
Sida loo dar Audio in QuickTime Video Files
> Resource > QuickTime > 10 xoogbadane QuickTime Maqaallo aan aad ugu garataan